Secret Files - Sam Peters ~ The ICT.com.mm Blog
Adventure နှင့် puzzle ရောစပ်ထားတဲ့ Secret Files ဂိမ်းစီးရီးရဲ့ နောက်ဆုံးဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ ဂိမ်းသစ်ဖြစ်ပြီး Africa တိုက် Ghana နယ်မြေက လူသားတွေရဲ့ သွေးကိုသောက်သုံးတဲ့ အကောင်ဆုံးကြီး Asanbosam အကြောင်းကို လိုက်လံစုံစမ်းရမည့် Journalist Sam Peters နေရာကနေ ဝင်ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဇာတ်လမ်းနှင့်အတူ သဲလွန်စမျိုးစုံရှာဖွေရမည့် Puzzle Game play တွေပါဝင်ပါတယ်။
Newer Tablet လား? Laptop လား? ဘယ်အရာ က သင့် အလုပ်အတွက် သင့်တော်မလဲ?
Older လုပ်ငန်းခွင်မှ လူငယ်များအတွက် အဆင့်မြင့် အသက်မွေးမှု အတတ်ပညာသင်တန်းကျောင်း CVT Myanmar